घरघरमा यस्तो भएपछि वर्षौपछि स्थानीयवासीको खुसीको सिमा नै छैन् ! | suryakhabar.com
Home कृषि घरघरमा यस्तो भएपछि वर्षौपछि स्थानीयवासीको खुसीको सिमा नै छैन् !
on: ३ जेष्ठ २०७५, बिहीबार १२:५८ In: कृषिTags: No Comments
यसैगरी खानेपानीका लागि ४५ घरधुरीलाई पायक पर्ने गरी नौ वटा धारा जडानबाट दम्काका सय घरपरिवार लाभान्वित भएका छन् । तीन किलोमिटर टाढाबाट पानी ल्याइएको सो आयोजनाका लागि नगरपालिकाले रू आठ लाख अनुदान र नपुग स्थानीयवासीबाट श्रमदान जुटाई खानेपानी निर्माण भएको हो ।
घरघरमा पानी पुगेसँगै स्थानीयवासीलाई नगदेबाली उत्पादन र सरसफाइ गर्न सहज हुनाका साथै सिँचाइको समस्या पनि समाधान भएको दम्काका नेत्र सिंहले बताए ।
गण्डक प्रभावित समुदायले दिए नहर थुनेर आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी
३ जेष्ठ २०७५, बिहीबार १२:५८